मेसीको घर माथीबाट जहाज उडाउन किन पाइदैन ? यस्तो छ वास्तविकता – Dainik Samchar
August 15, 2021 542
एजेन्सी । अजेन्टिनाका चर्चित स्ट्राइगर लियोनेल मेस्सी फिफा विश्वकपको सेरोफेरोमा ब्यापक चर्चामा छन् । आइसल्याण्डसँग बराबरी खेलेको उद्घाटन खेलमा मेस्सीले कुनै उत्साहजनक प्रदृशन गर्न नसकेपछि उनको चर्चा भन्दा बढी आलोचना सुरु भएको छ ।मेस्सीका अन्धभक्त कैयौँ फ्यानहरुलाई उनले आगामी खेलमा गतिलो जवाफ दिने भनेर तत्कालका लागी थामीरहेका धेरै समाचारहरु आइरहेका बेला मेसीको घरमाथिबाट विमान उडाउन प्रतिबन्ध लगाइएको खबर आएको छ ।
उनको घर पुरै पर्यावरणमैत्री छ। कौसीबाट हेर्दा चारैतर्फ हरियालीले भरीएको छ । उनको घर माथीबाट जहाजलाई अनुमती नदिइएका कारण कतिपय एयरलाइन्सहरु भने रुष्ट भएको बताइन्छ ।मानिसको जीवनमा अनेक संयोगहरु हुने गर्छन् । तर कतिपय संयोग यस्ता पनि हुन्छन्, जो मानिसले कल्पनासम्म गरेका हुँदैनन् ।यस्तै भएको छ, अमेरिकाको फ्लोरिडा बस्ने २४ वर्षीया एक युवती र ७८ वर्षका बृद्धलाई ।
Prevयसरी निकालियो कुखुराको सुलीबाट बिजुली ! ६२ केभिएको जेनेरेटर
Nextअफगानिस्तानको सबै शहर तालिबानको कब्जामा, ३५ जना नेपालीको अवस्था अज्ञात